NG WhatsApp Apk 2022 Download ho an'ny Android [WA Mod]
Salama daholo, tafaverina miaraka amina rindranasa mahavariana iray hafa izahay. Araka ny fantatrao fa tsara ny fampiasana sehatra media sosialy, saingy ny sasany amin'ireo fameperana amin'ireo fampiharana ireo dia vao mainka miharatsy azy. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny NG WhatsApp, izay ny kinova farany WhatsApp.
Eny an-tsena dia misy mods maro hafa an'ity rindrambaiko ity, fa maninona izahay no manolotra an'io? Betsaka ny antony ao ambadik'ity, izay hizaranay aminareo rehetra eto ambany. Mila mijanona miaraka aminay vetivety fotsiny ianao dia afaka mampiasa an'io fampiharana io soa aman-tsara.
Topimaso momba ny NG WhatsApp Apk
Izy io dia rindrambaiko mod maimaimpoana, izay manolotra fiasa an-taonina izay tsy nisy tamin'ny kinova voalohany. Araka ny fantatrao fa app-app dia iray amin'ireo sehatra media sosialy be mpampiasa indrindra, misy olona an-tapitrisany mizara angona manokana sy ofisialy.
Saingy misy fameperana, izay mahatonga ny dikan-teny tany am-boalohany ho ratsy kokoa. Noho izany, nitondra anao ity kinova mod ity izahay, izay manolotra endri-javatra vaovao marobe. Hizara ireo endri-javatra etsy ambany ireo isika, ka andeha hojerentsika izay azontsika avy amin'izany Mod App.
Ampitomboy ny fandefasana data
Ao amin'ny dikan-teny ofisialy, dia voafetra ihany ny mandefa na mampakatra rakitra na horonan-tsary 100MB. Saingy amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mampitombo ny fetra mankany amin'ny fantsakanao.
Izy io dia manolotra anao hamaky hafatra hafa tsy misy marika famantarana miseho aminy, izay midika fa tsy fantatry ny hafa fa namaky ny hafany ianao.
Manolotra lohahevitra samihafa hampiharina izy, izay mahasarika kokoa azy.
Afeno ny Tantara
Azonao atao ny mifehy ny fikirakira tantaranao, izay ahafahanao mametaka tantara amin'ireo mpifantina mifantina. Fifandraisana mifantina ihany no afaka mahita ny tantaranao. Etsy ankilany, azonao atao ny mijery ireo tantara hafa nefa tsy fantatrao.
Endri-javatra lehibe an'ny NG WhatsApp App
Rehefa miresaka ny sasany amin'ireo fiasa ao amin'ireo fehintsoratra etsy ambony isika, dia misy zavatra hafa azo hazavaina. Noho izany, mizara lisitra tsotra misy fiasa lehibe aminao izahay. Azonao atao ihany koa ny mahita fampiharana mahatalanjona kokoa ary zarao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Tononkalo maro lohahevitra
Mijery ny hafa
anarana NG WhatsApp
Anaran'ny fonosana com.yowhatsapp2
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 4.2 sy Abo
Eny, azo antoka ny fampiasana azy. Izahay dia nisedra an'ity rindranasa ity tamin'ny fitaovana marobe ary mety amintsika izany. Saingy tsy izahay no mpamorona an'ity rindranasa ity. Noho izany, tsy afaka manome karazana antoka manokana momba ny fiarovana isika. Raha te hampiasa azy ianao dia azonao atao izany raha atahorana anao.
Ahoana ny fampidinana ny NG WhatsApp Apk?
Araka ny fantatrao fa sarotra ny mahita mod apps, satria tsy manohana azy ireo ny Google Play Store. Ka noho izany dia nitondra rohy azo antoka sy miasa ho an'ity rindranasa ity izahay. Mila tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity.
Ahoana ny fametrahana Apk?
Mba hametrahana ity rakitra Apk ity dia mila manova fanovana vitsivitsy ianao. Tsy dingana sarotra hatao, fa ho anao rehetra, hizara ny fizotran'ny fametrahana amin'ny dingana maromaro izahay. Araho fotsiny ny dingana fametrahana raha hametraka tsara ity app ity.
NG WhatsApp dia fampiharana Android maimaimpoana. Io ilay kinova maodely, izay manolotra endri-javatra mahavariana maro izay tsy avela amin'ny kinova voalohany.
Ho an'ny fampiharana Android mahatalanjona kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Apps, Fifandraisana Tags Mod App, NG WhatsApp, NG WhatsApp Apk, NG WhatsApp App Post Fikarohana
Fikri Apk 2022 alaina ho an'ny Android [sarimihetsika maimaim-poana]